"Waan ka Xumahay Walaal" - Xiddig Man City Ah Oo Xifaaltanka Meel Iska Dhigay Soo Kabasho Deg-Degna Ahna U Rajeeyay Van Dijk - Gool24.Net
“Waan ka Xumahay Walaal” – Xiddig Man City Ah Oo Xifaaltanka Meel Iska Dhigay Soo Kabasho Deg-Degna Ahna U Rajeeyay Van Dijk
October 19, 2020 Apdihakem Omer Adam
Daafaca dhexe ee kooxda Manchester City ee Aymeric Laporte ayaa meel iska dhigay xifaaltanka kala dhaxeeya dhigooda Liverpool isaga oo wanaag iyo soo kabasho deg-deg ah u rajeeyay Virgil Van Dijk oo uu dhawaan dhaawac gaadhay.
Xifaaltanka garoonka dhexdiisa ka jira ayaa ah wax muhiim u ah kubadda cagta balse taasi lama micno aha inay dareen ka xumaan ah isku dareemi karaan xiddigaha kubadda cagtu marka mid kamid ah halisi gaadho.
Jamaahiirta kubadda cagta horyaalka Premier League ayaa arkay daafaca dhexe ee Reds ee Van Dijk oo Sabtidii uu gaadhay dhaawac halis ah oo jilibka ahi kaddib loolan uu kala kulmay goolhayaha Everton ee Jordan Pickford.
Haddiiba uu jiro qof aqoon fiican u leh dhibaatada uu leeyahay dhaawac jilibka ahi dabcan waa Aymeric Laporte kaas oo horraantii xilli ciyaareedkii hore dhaawac uu bilooyin ku maqnaa ku habsaday.
Maqnaanshaha Aymeric ayaa musiibo daafac ku noqday Manchester City oo tan iyo markii uu dhaawacmay qaladaad daafac oo sababay inay horyaalka weydo gashay.
Si lamid ah waxa la filayaa inay Reds u dhibtoodaan maqnaanshaha VVD oo aad muhiim ugu ahaa safkooda dambe iyadoo la saadaalinayo inay saxeexa daafac dhexe samayn doonaan bisha January.
Haddaba, kaddib qoraal dheer oo uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay Virgil waxa falcelin ka bixiyay Laporte oo sheegay inuusan wax lagu farxo ahayn dhaawaciisu xataa haddii ay xifaaltamaan kooxahoodu.
“Waan ka xumahay walaal, wanaag oo dhan ayaan kaaga rajaynayaa soo kabasho deg-deg ah, marnaba maaha wax lagu maadsado ama lagu farxo xataa haddii aanu xifaaltano” ayuu qoraal ku yidhi Laporte.